၈၈ ရဲ့ နော်မန်: 9/28/08 - 10/5/08
စာတိုတပုဒ် ၊ မှတ်တိုင်တရပ်
ဓါတ်ပုံတပြ ၊ မချန်ရနိုင်
နိုင်ငံကိုချစ် ၊ ပြည်သူချစ်တဲ့
တကယ့်ဇာနည် ၊ အာဇာနည်တွေ
အမိမြေတွက် ၊ အသက်ကိုစွန့် 
ဘဝစွန့် ကြ ၊ ပြသွားကြပြီ
ကြည့်ကြ ကြည့်ကြ ကြည့်ကြပါ ။
ပေတရာပေါ် ၊ လမ်းမပေါ်မှာ
အာဇာနည်တွေ သွေးစက်ဝေလျက် ။
အကျဉ်းထောင်ထဲ ၊ အချုပ်ထဲမှာ
ဂတ်ထဲ ရုံးထဲ ၊ ငရဲစခန်း
ညှင်းပန်းပေါင်းစုံ ၊ အဖုံဖုံထဲ
တောထဲ တောင်ထဲ ၊ လျှိုမြောင်ထဲမှာ
မိုးထဲ ရေထဲ မုန်တိုင်းထဲမှာ
အာဇာနည်တွေ ၊ အာဇာနည်တွေ
သွေးစက်ဝေလျက် ၊ တိုက်ပွဲဆက်ရင်း
အသက်ကိုပေး ၊ ဘဝပေးခဲ့ 
မငဲ့ ကိုယ်ကျိုး ၊ မမျှော်ကိုးပဲ
အသေရဲလှ ၊ ပြသွားကြတဲ့
အညတြဇာနည် ၊ ပြည်သူ့သူရဲကောင်း
ပြန်ပြောင်းတသ ဦးညွတ်ကြပါ ။
သစ္စာမဖောက် ၊ လမ်းမပျောက်နဲ့ 
လမ်းဖျောက်သူကို ၊ ကျိန်စာဆိုလိမ့် 
ဟိုမှာ ဒီမှာ သွေးစက်တွေ ။ ။
ရဲဘော်ကြီး ညိုထွန်းအောင် ( အမှတ်တရ )
ဒီနေရာက ကျနော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားဂွင် “အထူးဒေသ” ရဲ့ အခြေအစပ်၊ ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့များ စစ်ကစား ကောင်းသည့်နေရာတော့ မဟုတ်၊ ဒေသအနေအထားအရကိုကလည်း စစ်ရေးအခေါ်အရ “ရန်ဝင်။ ငါဝင်ဒေသ”၊ ရန်သူ့စိုးမိုးဂွင် မြေပြန့်နှင့် မိမိတို့ခြေကုတ်ဒေသတို့ ထိစပ်နယ်မြေ၊ ဤနေရာကို ရောက်လာခဲ့ကြသည်က အလုပ်အဖွဲ့ငယ်တခုဖြစ်သည့် ရဲဘော်ထူးအောင်နှင့် ကျနော်၊ ထို့အပြင် ရွာသားတချို့၊ ကျနော်တို့အဖွဲ့တွင် ထူးထူးခြားခြား မှတ်တိုင်တခုကို ထမ်းထားသည်၊ ထိုမှတ်တိုင်တွင် ရေးထားသည်က …
မှတ်ချက် ။ ။ ဆုံဆည်းရာ မှ ... ကူးယူ တင်ပြပါ၏ ။
‘ သစ္စာသေသော် ’...
မုန်းသူတွေက ပန်းခွေ ချ ပြီး
မြွက်ကြားသီဟ ဂုဏ်ပြု ကြ ပေါ့...
Posted by နော်မန် at 2:52 AM
ရုပ်မြင်သံကြားမှာ မှုန်တိုင်းသတင်းတွေ ဆက်တိုက်ပါလာပြီး တနေ့ထူးထူးခြားခြား တနေရာ မှာ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး ပြိုပျက်လဲကျကုန်ပေမဲ့ အိမ်တလုံးက ထီးထီးကြီး ကျန်နေ ခဲ့တာ တွေ့မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူအားလုံးကလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာ။ မှုန်တိုင်းလာတော့မယ် ဆိုရင်ပဲ လုံခြုံတဲ့ နေရာတွေကိုရွေ့ဖို့ အစိုးရကစီစဉ်တော့ မရွေ့ချင်တဲ့သူကရှိသေးတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး ပျက်စီးကြေမွနေပေမဲ့ သေဆုံးတဲ့စာရင်းက ဆယ်ဂဏန်းထက်မပို။ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်မယ့်သမ္မတလောင်းတွေကလည်း စာနာစိတ်တွေနဲ့ သူတို့ကိစ္စကိုဦးစား မပေး။ အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုပေမဲ့ သူ့ဘက်၊ ကိုယ့်ဘက် မျှမျှတတ။ သြော်.. လူလူခြင်း အတူတူတောင် လူဖြစ်ရတဲ့ ဘဝခြင်းကမတူ။ အင်း… တူအောင်ညှိဖို့ကလည်း သကြားမင်း တောင်မတတ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။
အိမ်လွမ်းသူ မှ ..... ကူးယူတင်ပြပါ၏ ။
အလုပ်ကပြန်ရောက်လို့ နည်းနည်းပါးပါးနားချိန်ရသလောက် ဘလော့တွေလိုက်ဖတ် ရင်း စီဘောက်တွေထဲမှာ ကွီနိုင်းကို ခဏခဏတွေ့တွေ့နေရလို့ တချိန်က မလေးနဲ့ ကွီနိုင်း ပေါင်းပြီး ကျမကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ရေးချင်စိတ်ပေါက်လာရပါတယ်။
လွန်လေပြီးသော ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကပါ။ စိမ့်ကြီး၊ မြိုင်ကြီး၊ ရိပ်ကြီးတောတောင် နေရာင်မခံ၊ ပန်းပျံပင်ဆင့်၊ မြေနှင့်ရန်ဘက်၊ ခက်လက်စိမ်းမြ၊ မိုးမခဘူး…… အစရှိတဲ့ သဇင်ပန်းအကြောင်း စပ်ဆိုထားတဲ့ ဝန်ကြီးပဒေသရာဇာရဲ့ ကဗျာကိုမှတ်မှတ်ရရ ရှိစေတဲ့ နေရာလေးမှာပါ။ သစ်ပင်ကြီးတွေက ကြီးမားလှပါတယ်။ သဇင်ပန်း ရှိမရှိဆိုတာ လှမ်းမမြင်နိုင် ပါဘူး။ သစ်ခွပန်းတွေကတော့ ပေါများပါတယ်။ ကျမသွားရမဲ့ ပစ္စည်းမဲ့လေးတွေဆီ မရောက်ခင် ခရီးတထောက်မှာပါ။ စိမ့်စမ်းရေတသွင်သွင်စီးဆင်းနေတဲ့ မြှောင်ကလေးထဲက တဲစုမှာ ကျမနေရစဉ်။
မြို့ကနေ တောထဲသွားရပါမယ်ဆိုမှ ဘဝင်မြင့်သွားသလားမသိ၊ ကျမမှာ ထမိန်မပါ သွားဘူး။ စမ်းချောင်းမှာ ရေချိုးရတော့မယ်ဆိုမှ ဒုက္ခရောက်တော့တယ်။ ရေချိုးရတဲ့နေရာက လူသူဝေးတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ဖာသာရှက်နေလို့ ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့ဘဲရေချိုးရတယ်။ အဝတ်လဲတော့မယ်ဆိုမှ ပြန်ဝတ်မဲ့အဝတ်ရေမစိုအောင် ခြုံနက်နက်ထဲ တိုးဝင်ပြီးလဲရပါရော။ အဲဒီမှာ ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်မဲ့ မလေးနဲ့တွေဖို့စတာ။
ရောက်ပြီးတလလောက်မှာ ကျမဆီကို မလေး စရောက်လာတယ်။ စမ်းချောင်းကနေ ရေချိုးပြီးအပြန် ချမ်းလာလို့ စောင်ခြုံပြီးကွေးပါတယ်ဆိုမှ အနွေးဓါတ်ကဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူး။ အတွင်းထဲကနေ စိမ့်ပြီးချမ်းလာလိုက်တာက ကလီဇာတွေလှိုင်းထနေသလား ထင်ရအောင် တုန်ခါလာပြီး၊ တော်တော်ကြာတော့မှ အပူဓါတ်ပြန်ရလာတော့တယ်။ အတွေ့အကြုံမရှိတော့ ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိဘဲ အတူနေတဲ့အမတယောက်ကိုပြောပြမှ မလေးလက်ချက်ဆိုတာ သိရတော့တယ်။ အဲဒီမှာ မလေးလာရင်တွေ့ဖို့ဆိုပြီး အရန်သင့်စောင့်နေတဲ့ ကွီနိုင်းက သူ့အ ပေါင်းအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ တထွာတို့ ပါရာတို့ကိုခေါ်ပြီး အင်အား အလုံးအရင်းနဲ့ ရောက်ချ လာပါရော။
မလေးကအချိန်မှန်တယ်။ သူ့အချိန်ကျမှ သူကနှိပ်စက်တာ။ သူနားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်အေးအေးဆေးဆေး နေနိုင်တယ်။ အစားလည်းမပျက်ပါဘူး။ ကွီနိုင်းတို့အုပ်စုရောက်လာ မှ ပိုပြီးဒုက္ခရောက်တော့တာ။ လားလား..နားတွေက တစီစီအော်နေပြီး ခေါင်းတွေကမထူနိုင် တော့ဘူး။ ပါးစပ်ကခါးပြီး၊ စားထားတာတွေကပြန်ထွက်.. အတော့ကိုရက်စက်တဲ့ ကွီနိုင်းပါ။ သူကနှိပ်စက်နေပေမဲ့ တနေ့သုံးကြိမ် သူအတွက်အားဖြည့်ပေးရတယ်။ မလေးကဘယ်လိုနေ လဲမသိပေမဲ့ ကျမကတော့ မထနိုင်တော့ဘူး။
အတူနေတဲ့ အမကအတွေ့အကြုံရှိတော့ အစားဝင်အောင်ကြိုးစားပေးရှာပါတယ်။ စမ်းချောင်းတိမ်တဲ့နေရာကို ရေစီးရပ်အောင် ပိတ်လိုက်ပြီး ကျောက်တုံးလေးတွေကြားမှာ ပုန်းခိုနေကြတဲ့ ငါးကလေး၊ ပုဇွန်ဆိတ်နဲ့ ဂဏန်းငယ်လေးတွေကိုဖမ်းပြီး တဲဘေးနားမှာ စိုက်ထားတဲ ချဉ်ပေါင်ရွက်နဲ့ ခပ်ပြစ် ပြစ်ချက်၊ မိုးမျှော်ငရုတ်သီးထောင်းစပ်စပ်ကို ထမင်းနဲ့ စားခိုင်းတော့မှ စားလို့ရတယ်။ အစားဝင် လိုက်မှ ကွီနိုင်းနှိပ်စက်သမျှ ခံနိုင်တော့တာ။
ခေါင်းထောင်နိုင်လာတော့မှ ကိုယ့်ရဲ့ပါတ်ဝန်း ကျင်ကိုသတိထားမိတော့တယ်။ သူတို့ နှိပ်စက်ထားလို့ အားငယ်စိတ်တွေဝင်နေရတဲ့ကြားထဲ အုံ့မှိုင်းနေလိုက်တာ ငိုချင်စရာပါ ဖြစ်လာ တယ်။ ခလုတ်ထိမှ အမိတ ဆိုသလိုဘဲ အမေ့ကိုလည်း သတိရလိုက်တာ။ အစက တည်းက ရည်ရွယ်ချက် ကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲ ကိုယ့်ရဲ့မတောက်တခေါက် ပညာလေးကို ပညာချို့တဲ့ မိဘမဲ့လေး တွေကို ဝေမျှချင်တာ တခုတည်းနဲ့လာခဲ့တဲ့ကျမ လာမိတာ မှားပြီလားဆိုတဲ့ နောင်တလေး နည်းနည်းရမိပါတယ်။ အမေရယ် ကျမကိုလာကြည့်လှည့် ပါအုံး။ အုံ့မှိုင်း၊ ညို့ဆိုင်းနေတဲ့ လူသူဝေးတဲ့ တောတောင်ထဲမှာ ကျမတယောက်တည်း။ ဒီအချိန်မှာ သေသွား လို့ကတော့ ကိုယ်ဘယ်ကိုသွားလို့သွားမှန်းမသိတဲ့ မိသားစုက သိခွင့် တောင်ရ လိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ တွေးရင်း ဆို့ဆို့နင့်နင့်ဖြစ်လာ၊ နေ့ခင်းကြောင်တောင် ပတ် ဝန်းကျင်က ပိုမှောင်လာလို့ မိုးနတ်မင်းကများ ငါ့ကိုအပြစ်ပေးတော့မလား။ ဆို့နင့်မှုတွေက ရင်ထဲမှာပြည့်ကြပ် လာလို့ သက်သာရာရအောင် အမေ ဆိုပြီးအော်ငိုပစ်လိုက်တာ တောင် နံရံတွေမှာပါ ပဲ့တင်ထပ် သွားခဲ့တယ်။
အော်ပစ်လိုက်တော့ ဆို့ကြပ်မှုတွေက နည်းနည်းသက်သာသွားတယ်။ ကျမကိုအား ပေးဖို့ လူတချို့ရောက်လာကြတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း လင်းလင်းချင်းချင်း နဂိုအတိုင်း။ မလေး နဲ့ ကွီနိုင်းတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခက ခဏလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး သူတို့နဲ့ ရင်းနှီးလာခဲ့တာ။ မလေးလာရင် စောင်ခြုံပြီး ဧည့်ခံလိုက်၊ ကွီနိုင်းလာရင် ချဉ်ပေါင်ဟင်းနဲ့ ဧည့်ခံရင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုလည်း ကျမခံနိုင်ရည်ရှိလာပြီ။ နောက် ပိုင်းကျ တော့ မလေးကညင်ညင်သာသာ။ သူလာတာတောင် ကိုယ်ကသတိ မထားမိ လို့ သွေးကစကား ပြောရတဲ့အထိ။ ကွီနိုင်းကလည်း မလေးကိုမနိုင်လို့ မဟာမိတ်လုပ်ထား သလား ထင်ရတယ်။ အချိန်တန်ရင် မလေးကလာမြဲ။
ကွီနိုင်းက အရှုံးပေးလက်နက်ချလိုက်လို့ အာတီစနိတ်နဲ့မက်ဖလိုကွင်းတို့ကို ပူးတွဲ တာဝန်ပေး လိုက်တော့မှ မလေးကထွက်သွားတော့တာ။ အခုချိန်အထိ ပြန်မလာတော့ပါဘူး။ တခါတလေတော့လည်း သတိရမိပါတယ် မလေးရယ်။ တို့တတွေက သုံးနှစ်ကျော်လောက် ရင်းနှီးခဲ့ကြတာမဟုတ်လား။
( ၂၅. ၉. ၂၀၀၈)
(မှတ်ချက်။ ။ မလေးကို မ’လေးဟုမဖတ်ဘဲ မလေးရှားနိုင်ငံကိုခေါ်သလို မလေးဟုဖတ်ပေးကြပါရန် စာဖတ်သူတို့ကို တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူကွီနိုင်းက ကျမကို ပြဿနာရှာမည်စိုးသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မ’လေးဆိုတာ လူကွီနိုင်းရဲ့ ကြင်သူသက်ထား ဇနီးမယား ဖြစ်နေလို့ပါ။ ကျမရေးခဲ့တဲ့ မလေးက မလေးရီးယားလို့ခေါ်တဲ့ ငှက်ဖျားပိုးသာဖြစ်ပါသည်။)
မှတ်ချက် ။ ။ အိမ်လွမ်းသူ မှ ..............ကူးယူ တင်ပြပါ၏ ။
Posted by နော်မန် at 3:00 PM